Amandla | I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd.
I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd ngumvelisi othe nkqo ngokuthe nkqo womhlaba onqabileyo womazibuthe we-Neodymium kunye neendibano ezinxulumene noko. Singayenza lula inkqubo yakho yeprojekthi kwaye sikuncede ekwenzeni imveliso entsha ukusuka kwimbono ukuya ekuzisweni.
Imveliso yeMagnet yeNeodymium
Ukuveliswa kwemagneti yeNeodymium lilitye lembombo lesicwangciso-qhinga se-Horizon Magnetics ukuqinisekisa unikezelo oluzinzileyo noluthe gqolo lweemagnethi ezikumgangatho ophezulu kunye neenkqubo zemagnethi ngakumbi ngexesha elikhethekileyo, umzekelo, ukunyuka kwamaxabiso okuphambeneyo kunye nokuhanjiswa okufutshane kwezinto ezinqabileyo zomhlaba. Umthamo wemveliso ephakathi, iitoni ezingama-500 zeeNeodymium iimagnethi zilawulwa ngokungqongqo ngaphandle kokwandisa amandla kodwa ukuphuculwa kolawulo ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezingqongqo zabathengi bethu.
Uyilo kunye nezoBunjineli
Sithanda umceli mngeni kwaye sinomdla kwizisombululo ezizimeleyo zokufezekisa imisebenzi ekhethekileyo yabathengi. Ulwazi lwethu lobuchwephesha kumazibuthe kunye namava aneleyo kwiinkqubo zemagnethi zomhlaba ezibanzi ezinqabileyo zisenza ukuba sikwazi ukubonelela abathengi ngesincomo esisebenzayo okanye inkonzo yoyilo ukuqala kwinqanaba lesigqibo ukuya kukufezekiswa kwemveliso yokugqibela. Ngaphezulu, inkonzo yokubuyisela umva iyafumaneka ukunceda abathengi ukuba baphucule uyilo esele lukhona.
Ukwenza ngaphakathi endlini kunye nokuLungisa
Uluhlu lwethu olubanzi lwezixhobo zobuchwephesha be-state-of-art zenza ixesha lokuhambisa kunye nomgangatho weemagnethi zebhloko yomatshini kunye nenxalenye yesinyithi eyila phantsi kolawulo. Inokuhlangabezana neemfuno ezizodwa zabathengi ezinjengexabiso elincinci, ukunyamezelana okungxamisekileyo, ukuhanjiswa okungxamisekileyo, iinkqubo ezinzima, njl njl., Ngakumbi kwimveliso entsha, amandla endlu anokuvelisa prototype ngexesha lokukhawulezisa inkqubo yophuhliso kunye nokulawula iimfihlo zokuyila iimveliso ezintsha ziyimfihlo.
Njengomboneleli othembekileyo womazibuthe womhlaba, iHorizon Magnetics izabalazela elona nqanaba liphezulu ukwanelisa iimfuno zabathengi ngophuculo oluqhubekayo. Izixhobo zokuhlola ezizenzekelayo eziphambili zenza ukuba uvavanyo olukhawulezileyo noluchanekileyo lokuhamba kwemagnethi kunye nokuphambuka kweengile kuqinisekiswe yonke imagnethi yevolumu ephezulu ehambelana nemfuno esemgangathweni kunye nesiphene zero kwizicelo ezingqongqo ezifana nezeemoto. Umazibuthe wethu onqabileyo kunye neendibano ziiRoHS kunye ne-REACH.
UkuBonelelwa ngoNyaka ngeeMveliso zeMagnet ezongezelelweyo
Iindidi kunye nobukhulu beendibano zemagneti ezimiselweyo ezifikelelekayo ezinje ngeemagnethi zokuloba, iimagnethi zokuvala, iimagnethi zembiza, iimagnethi zokuloba kunye neemagnethi zeofisi ziyafumaneka kwisitokhwe sokuhambisa ngokukhawuleza. Imveliso yemagneti yeNeodymium kunye nokuyila ngaphakathi endlwini kunokwenza iinkqubo ezahlukeneyo ezinqabileyo zomhlaba xa kuceliwe. Ubungcali kwimagnethi busivumela ukuba sifumane ezinye izinto ezisisigxina zemagnethi ngobungakanani obuncinci kodwa kufuneka siyimfuneko yokudibanisa ukuthunyelwa kube lula.